Interview with Hangyug Agyat
पहिलो कुरा, म साहित्यलाई खेती मान्दिनँ । साहित्यको सम्बन्ध मनसित, मस्तिष्कसित हुन्छ । साहित्य ज्ञानसित हुन्छ । - Hangyug Agyat
मेची अञ्चल इलाम जिल्ला अन्तर्गत इलाम नगरपालिका वडा नं. १ मा २०३३ साल पौष १ गते जन्म लिनुभएका सिर्जनशील अराजक कवि हाङयुग अज्ञातले कलामा स्नातक सम्म अध्यायन पुरा गर्नुभएको छ । वहाँ सिर्जनशील अराजक साहित्यका प्रवर्तक मध्ये एक हुन् । रङ्गीन आविष्कार - २०५७,ढुङ्गामुढाको मन - २०५८,करङको हिरासत - २०६०,ककपिक - २०६१ आदि उनका कविताकृतिहरु प्रकाशन भैसकेकाछन् । साहित्य समन्वयको सम्पादन साथै हङकङको आगमन पछि सिर्जनशील साहित्य समाज हङकङको अध्यक्षको पदमा रहि साहित्य सेवामा अनवरत लागि पर्नु भएको छ । नेपाली आदिवासी जनजातीहरुको भाषा साहित्यलाई नेपाली साहित्यको मुलधारको रुपमा हुनुपर्छ र हो भन्ने वहाँको मान्यता रहदै आएको छ । नश्लवोधिय लेखनलाई सिर्जनशील अराजक समूहले मुख्य नाराको रुपमा लिदै लेखन क्षेत्रमा नौलो साहित्यको पाटालाई जनमानसमा प्रस्तुत गर्न सक्षम भैरहेको छ । उनै साहित्यका सर्जक कवि हाङयुग अज्ञातसंग लिम्वुवान डट ब्लगस्पोट डटकमका ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नुभएको कुराकानीको अंश पाठकहरुको लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. हङकङको व्यस्त समयसँग साहित्य लेखनको तालमेल कसरी मिलाइरहनु भएको छ ? र, हाल हङकङमा समय कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
हङकङ आउनु दुइदिन अगाडि नेपालका वरिष्ठ कवि तथा गीतकार इश्वरवल्लभज्यूले म हङकङ जाँदैछु भन्ने थाहा पाएर मलाई केही अर्तिउपदेश दिनुभएको थियो । चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएको बेला उहाँ हङकङ पनि निस्किनु भएको रहेछ । पहिलो कुरा उहाँले हङकङको समय घोडाजस्तो दौडिन्छ तेसैले यो समयसित तालमा ताल मिलाउन सकिएन भने पछाडि परिन्छ भन्नु भएको थियो । र, दोश्रो कुरा समुन्द्र सधैँ मुख आँ गरेर बसेको हुन्छ तेसले निल्नसक्छ, कहिलेकाहीँ तमोर र अरूणलाई पनि सम्झीनू भन्नु भएको थियो ।इश्वरवल्लभका यी दुइ वचनले मलाई हङकङको व्यस्त समयसँग लाप्पा खेल्ने आँट दिएको हो । भर्खर इश्वरवल्लभ पनि बितेछन् नेपालमा । व्यस्त समयसँग साहित्य लेखनको तालमेल मिलाउन गारो हुन्छ । तथापि, मैले उता नेपालका प्रख्यात कविलेखकहरूले व्यस्त समयसित साहित्य लेखनको तालमेल मिलाएको देखेर आएकोले यहाँ मलाई तेत्ति गारो परेन । नेपालमा व्यस्त समयसित तालमेल मिलाउनेमा विष्णुविभु घिमिरे, दिनेश अधिकारी, कृष्ण धराबासी, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, गोविन्दराज भट्टराई प्रख्यात छन् । मलाई यतिबेला के लागिरहेको छ भने साहित्य लेखनका लागि थोरै समय पनि पर्याप्त हुन्छ । सप्पैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि साहित्यप्रति बलियो विश्वास हुनुपर्छ । म २४ घण्टामा पाँच घण्टा सुत्छु । सुतेको बेला सपना देखेँ भने पनि म तेसलाई साहित्यको आँखाले विचारविमर्श गर्छु जागेको १९ घण्टा त म साहित्यकै विषयमा साहित्यकै वरिपरि चिन्तन गरेर बिताउँछु । यो चौबिसै घण्टा साहित्यको संसारमा खेल्ने मेरो व्यक्तित्व यौटा भो भने अर्को व्यक्तित्व छ जो सधैँ व्यवहारिक छ । त्यो व्यक्तित्व अन्य र्सवसामान्य मान्छेजस्तो काममा जाने, कोठा फर्किने, भात पकाउने खाने र सुत्ने गर्दछ । यो दुइ बेगलबेगल व्यक्तित्वहरूको तालमेल मिलाउनुका लागि लामो समयको स्थिर साधना चाहिन्छ । यी दुइ व्यक्तित्वहरूको तालमेल मिलेन भने कि त आफ्नो संसारिक जीवन चौपट हुन्छ कि त लेखन जगतमा विपद आइलाग्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा हङकङको व्यस्त समय र साहित्य लेखनलाई सृजनात्मक सोच र शैलीले भरसक तालमेलको दायराभित्र ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु । र, हङकङको समय पनि यीनै यस्तै कुराहरूमा बितिरहेको छ ।
२. सृजनशील अराजक समूहको कहिले स्थापना भएको हो ? यसका प्रमुख उद्देश्यहरू के के हुन् ? हाल यो समूहको गतिविधि कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?
सृजनशील अराजक समूह नामको कुनै सङ्गठन छैन । हामीले वि.सं. २०५२ सालदेखि नेपाली साहित्यमा यौटा सँस्कृति, यौटा धर्म, यौटा सौर्न्दर्यचेत, यौटा पक्ष, यौटा स्वभाव मात्रै हाबी भयो तेसकारण नेपाली साहित्यको विकास सोलोडोलो रूपमा भइरहेको छैन भन्न थालेका हौं । पछि २०५७ सालमा चाहिँ म र राजन मुकारूङ मिलेर नेपाली साहित्यमा 'सृजनशील अराजकताको आग्रहसम्मत्मा पाँचवटा कुराहरू प्रक्षेपण गर्‍यौं,
१) वैचारिक अनेकानेक
२) साँस्कृतिक वैविध्य
४) कवित्व निस्सीमता
५) र, सृजनात्मक निर्णय। <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
यसको उद्देश्य भनेको तथाकथित् नेपाली साहित्यलाई साँच्चिकै नेपाली साहित्य बनाउनु रहेको थियो र यो आठ-नौ वर्षो अवधिमा तथाकथित् नेपाली साहित्यको परम्परागत धारणाहरू भत्किदैं नयाँ मान्यताहरू स्थापना हुँदैछन् । आदिबासीजनजातिले साहित्य लेख्न सक्दैनन् या उनीहरूले लेखेको साहित्य साहित्य होइन भन्ने ब्राम्हणवादी पुरेत वर्गका लेखकहरूको अहङ्कारलाई धेरै हदसम्म सृजनशील अराजकताको आग्रहले ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । नेपाली समाजजस्तै नेपाली साहित्य पनि विविधताको योग हो भन्ने मान्यता एकप्रकारले नेपाली साहित्यकार र प्राज्ञहरूमा स्थापित भइसकेको छ । अब यसलाई राज्यसत्ताले स्वीकार्न बाँकी छ । राज्यसत्ताले स्वीकार गरेपछि नेपाली साहित्य धेरैधेरै सँस्कृति, धेरैधेरै जाति, धेरैधेरै वर्ग र लिङ्गको साझा थलो हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजाले देखाएको प्रष्ट कुरा भनेको नेपालीहरूको विविध अस्तित्वलाई जसले सम्मान गर्छ उसैलाई आमजनताले स्वीकार गर्छ भन्ने हो । सृजनशील अराजकताले आग्रह गरेको नेपाली साहित्यको मोडेल र प्रचण्डपथले अग्रसर गराएको नयाँ नेपालको संघात्मक राज्यप्रणालीको बनोट झन्डै मिल्दोरहेछ । हाम्रा गतिविधिहरूको सवालमा चाहिँ कवि राजन मुकारूङ हाम्रा विचारहरूलाई मूर्त रूप दिन प्रत्यक्ष आमजनतामा पुगेर चेतना फैलाइरहनु भएको छ भने कवि उपेन्द्र सुब्बा केन्द्रमा बसेर केन्द्रलाई धक्का पुर्‍याउने काम गरिरहनु भएको छ । म भने हङकङबाट अन्तरराष्ट्रिय विचारपद्घतिको अध्ययन तथा अवलोकन गर्दै यहाँका कविहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा संलग्न छु । उता पान्थरमा सृजनशील उत्तरवर्तीहरू पनि खटिरहनु भएको छ । काठमान्डौमा रङ्गवादीहरूले अत्यन्तै त्रि्र रूपमा सृजनशील अराजकताको गतिविधिलाई बढाइरहेका छन् । यहाँ हङकङमै पनि भयवादका नाममा देश सुब्बाले आदिबासीहरूको सँस्कृति र परम्परा खोजिरहनु भएको छ । मुक्त अभियान पनि दमकबाट सञ्चालित छ । यी सप्पैलाई मैले सृजनशील अराजकताका गतिविधिहरूको रूपमा बुझेको छु ।
३.तपाइँहरूले लेख्ने साहित्यले कुन वर्गसमाज र कस्तो खाले लेखनको प्रवृत्तिलाई बढी मुखरित गर्दछ ? हालसम्म सृजनशील अराजक लेखनले समाजमा कति प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ ?
हामीले प्रस्ताव गरेको साहित्यले छुने वर्ग भनेको उत्पीडित, उपेक्षित, आदिबासीजनजाति, मधेसी र दलितदमित वर्गसमाज हो । तेसो त हिजोका प्रगतिशील भनाउँदाहरूले पनि यही भन्थे तर उनीहरूले नारा मात्रै दिएका रहेछन् । मोदनाथ प्रश्रतिको कुरा हेरौं, ऊ आफूलाई नम्बर वन प्रगतिशील मान्छ, उत्पीडितउपेक्षित, आदिबासी तथा मधेसीको पक्षको लेखक हूँ भन्दै पञ्चायतकालभरि घुमिहिँड्यो तर हिजोआज उत्पीडिउपेक्षित वर्गलाई नै तथानाम् गाली गर्दै, दबाउँदै लेखिरहेको छ । त्यो प्रदीप नेपाल र खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको पनि पारा उस्तै हो । डेमोक्र्याटिक लेखकहरूको सर्न्दर्भमा चाहिँ के छ भने उनीहरूले भरसक उत्पीडितउपेक्षितहरूको मुद्दालाई लेख्नै चाहदैनन्, लेखेको खण्डमा पनि भाग्यवादमा लगेर हुल्छन् । हिजोआज केही छन् यस्ता सुध्रिएका डेमोक्र्याट्सहरू, जस्तो गोविन्दराज भट्र्राई, कृष्ण धराबासी, सञ्जीव उप्रेती आदि । अब हाम्रो लेखन प्रवृत्ति भनेको चाहिँ तथाकथित् प्रगतिशील र डेमोक्र्याट्सहरूको भन्दा बेगल छ । यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले सृजनशील प्रवृत्ति भन्ने गरेको छु । यो प्रवृत्तिमा माथि नै मैले भनेँ जस्तो पाँचवटा सहमति बनाउनु अनिवार्य छ । पछि यो पाँचवटामा कसैले सृजनात्मक निर्णय गरेर केही थप्दै आउँछ भने पनि तेसलाई सृजनशील प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ । जस्तो धर्मेन्द्रविक्रमहरूले रङ्गवाद भनेर थप्दै आए, देश सुब्बाले भयवाद भनेर थप्दै आए, भवानी तावाहरूले सृजनशील उत्तरवर्ती भनेर थप्दै आए । भोलि अरूहरू आउलान् नयाँ कुराहरू थप्दै जालान् । सृजनशील प्रवृत्तिको यो परिवर्तनशीलतालाई फोकस गर्दै कतिपय समिक्षकहरूले यो मार्क्सवादजस्तो रहेछ पनि भनेका छन् । कतिले त नन्कन्फर्मिस्ट पनि भनेका छन् । पछि समय आइपुगेपछि यो प्रवृत्तिको पुरै रूप देखिएला, अहिले विकासक्रममै छ । सृजनशील अराजकताको आग्रहले हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिरहेको छु म । किनभने नेपाली साहित्यमा र्राई, लिम्बू, गुरूङ, मगर, तामाङ, सुनुवार, लगायत अन्य जनजाति समाजबाट विचार र सौन्दर्य भित्रिरहेको छ । नेपाली समाजमा वैचारिक अनेकानेक, साँस्कृतिक वैविध्यता र नश्लीयबोधले सुन्दर प्रभाव पारेको कारणले नै आमजनताले माओवादीलाई धेरै मतदान गरे । काङ्ग्रेस र एमालेको वैचारिक अनेकानेक, साँस्कृतिक वैविध्यता र नश्लीयबोधमा अस्पष्ट विचार भएकै कारणले आमजनताले सृजनात्मक निर्णय गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो भारी मत दिएनन् । नेपाली समाजमा अब क्षेत्रीबाहुनले आदिबासीजनजातिहरूको अस्तित्व मान्ने, मधेसीहरूको अस्तित्व पहाडबासीहरूले मान्ने, पुरूषहरूले नारीहरूको अस्तित्व मान्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ । सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने सृजनशीलहरूको यो सकारात्मक प्रभावलाई इतिहासले बिर्सिने छैन ।
४. तपाइँले नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानको आठौं वाषिर्कोत्सवमा नयाँ लेखकको जन्मको घोषणा गर्नु भयो, त्यो कस्तो प्रकारको नयाँ लेखक होला ? को हो त्यो नयाँ लेखक र किन तपाइँले नै घोषणा गर्नु भयो ?
नयाँ लेखकको जन्म बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मञ्च र समय दिएकोमा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानको आठौं वाषिर्कोत्सवलाई र विषेशगरी कवि टङ्क सम्बाहाम्फेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्ग, जाति र लिङ्गका मुद्दाहरूलाई जुन लेखकले आफ्नो लेखनमार्फत उठाएर न्यायका निम्ति पहल गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि जनचेतनासित सहकार्य गर्दछ त्यस्तो लेखक नयाँ लेखक हो । नेपाली साहित्यमा यसरी योगदान पुर्‍याइरहेकाहरूलाई नयाँ लेखकका रूपमा पहिचान गरिकन नयाँ नेपालको राज्यसत्ताले उनीहरूबाट अरू धेरै सृजनशील साहित्यको अपेक्षा गर्दा हुन्छ । विषेशगरिकन यसप्रकारका लेखकहरू उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्ग, जाति र लिङ्गबाट नै आइरहेका छन् । विश्वसाहित्य पढेका तथाकथित आभिजात्यवर्गका केही लेखकहरूमा पनि यो नयाँ लेखकको चरित्र पाइन्छ, यो निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । आदिम विचारबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु नै नयाँ लेखकको नयाँ र समयसापेक्ष यात्रामा अग्रसर हुनु हो, अग्रगामी लेखक हुनु हो । मैले नै किन नयाँ लेखकको घोषणा गरेँ भन्ने प्रश्न चाहिँ \_'माओवादीले नै जनयुद्घ किन गर्‍यो -\_' भने जस्तै हो । तर, यसलाई अर्को ढङ्गबाट बुझ्दा भने म राज्यसत्ताबाट उपेक्षित तथा उत्पीडित जातिबाट साहित्यमा आएकोले सायद मबाट नयाँ लेखकको घोषणा भएको होला । यो मनोविश्लेषणको कुरा भयो । यसैलाई दर्शनतिरबाट व्याख्या गर्दा यसरी पनि गर्न सकिन्छ- हरेक लेखक साधन हो र हरेक लेखकहरू फेरि बेगलबेगल थोकका लागि साधन हुन् । हरेक लेखकहरूको प्रयोजन भिन्दाभिन्दै हुन्छ । मेरो सवालमा भने म सधैँ नयाँ थोकहरू बोक्ने साधनका रूपमा उपस्थित भएँ । तेही भएर पनि नयाँ लेखकको अवधारणापत्र मैले लेखेँ । तर, यसलाई अझ आमजनमानससम्म पुर्‍याउनका लागि तपाइँहरूजस्तो सृजनशील लेखकहरूको खाँचो अनिवार्य छ । नयाँ लेखक साझा अवधारणा हो, हरेक नयाँ नेपाली लेखकहरूको सिङ्गो ठहर हो । तेसो र पनि यो नयाँ लेखकको अवधारणालाई हामीले गाउँगाउँसम्मका हाम्रा पाठक र स्रष्टाहरूसम्म पुर्‍याउनु जरूरी छ । किनभने नेपाली साहित्यमा हाम्फाल्नुभन्दा अगाडि सबैले यो नयाँ लेखकको अवधारणा थाहा पाउनै पर्छ । नयाँ लेखकको अध्ययन अवलोकनबिना हाम्रो मस्तिष्कमा छ्याप्प बसेको यथास्थिति र पुरातनवादको जालो हट्ने छैन । यो नयाँ लेखक तपाइँ हामी सबै हौं जसले पुरानो ब्राम्हणवादी अहंकारी साहित्यलाई ध्वस्त गर्दै समावेशी नेपाली साहित्यको पक्षमा लेख्छ । सबैसबै नेपाली समाजहरू, सँस्कृतिहरू, धर्महरू र जीवनहरू समेटिएको साहित्य मात्रै यथार्थमा नेपाली साहित्य हो भन्ने धारणा अनुसार अब हामीले लेख्नुपर्छ । अर्जुनदृष्टिका कविताहरू मात्रै होइन काङसोरे साहसका कविताहरू पनि लेखौं, नयाँ लेखकले यसो भन्छ । नयाँ लेखक नै वास्तवमा नयाँ नेपाली साहित्यको सुत्रधार हो, नयाँ नेपालको नयाँ लेखक हो ।
५.अधिकांश नेपाली साहित्यकारहरू साहित्यको खेती मात्र गर्छन् तर पैसाको खेती गर्न भने विदेशतिरै लाग्नु पर्ने बाध्यता छ । तपाइँ के भन्नु हुन्छ यस बारे किनकी तपाइँ आफै नै डायोस्पोराको साहित्यकार बनिसक्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा, म साहित्यलाई खेती मान्दिनँ । साहित्यको सम्बन्ध मनसित, मस्तिष्कसित हुन्छ । साहित्य ज्ञानसित हुन्छ । साहित्य लेखेर विकसित मुलुकहरूमा लेखकहरू बाँच्न सक्छन्, त्यो अलग कुरा हो । पैसाको खेती गर्न विदेशतिर लाग्नुपर्ने बाध्यताको जो कुरा छ, तेसमा पनि म असहमत छु किनभने विदेशमा पनि पैसाको खेती हुँदैन, बाँच्ने मेलोसम्म गर्न सकिन्छ । हिजोआज म पनि तपाइँहरू जस्तै हङकङमा बसेको छु । श्रम बेच्छु खान्छु । दोश्रो कुरा के छ भन्देखिन् तपाइँको प्रश्नको मर्मतिर म जान चाहन्छु । मैले धेरै अगाडिदेखि नै सुन्दै आइरहेको छु कि नेपाली साहित्यकारहरू कलम चलाएर बाँच्न सकिरहेका छैनन् । अथवा, साहित्य बेचेर नेपाली साहित्यकारहरूले पैसा कमाइरहेका छैनन् । पाश्चात्य दर्शनशास्त्र भनेको भौतिकवादतिरको छ भने पूर्वीय दर्शनशास्त्र अध्यात्मवादतिरको छ । तेसो हुँदा उता शेक्सपियरले कवितामा 'पैसालाई जीवित इश्वर' भनेर लेखेका छन् अब हाम्रो देवकोटाको पारा हेरौं, ऊ मुनामदनमा लेख्छ- सुनका थैला, हातका मैला के गर्नु धनले - यो दर्शनगत आधारहरूमा पाइने ठीक विपरित मान्यताका कारणले पनि उताका साहित्यकारहरू साहित्यलाई बेच्न सक्षम भएको हुनुपर्छ । यता हामी चाहिँ के गर्नु धनले भन्दै आर्दशले नाङ्गैभुतुङ्गै भइरहेका छौं । पैसा, धनसम्पत्ति पनि आफूलाई पुग्नेगरी जोड्नुपर्छ तर सारै नै नीच प्रकारले होइन । नेपाली साहित्यमा जम्मा तीन प्रकारका साहित्यकारहरू छन् । पहिलो प्रकारका साहित्यकारहरूसित पैसा प्रशस्तै छ, उनीहरू व्यापारव्यवसाय गर्दछन् । नेपाल टेलिभिजनको समय किनेर आफ्नो गीति एल्बमको प्रत्यक्ष प्रशारण समेत गर्नसक्छन् उनीहरू । दोश्रो प्रकारका साहित्यकारहरू सरकारी जागिर खान्छन्, या कुनै एनजिओ या कलेजमा काम गर्दछन्, या मिडियामा काम गर्दछन् । तेस्रो प्रकारका साहित्यकारहरूसित कुनै पनि नियमित रूपमा पैसा आउने काम हुँदैन । र, यो तेस्रो प्रकारका साहित्यकारहरूमा बढीजसो आदिबासीजनजातिहरू देखा परिरहेका छन् । उनीहरू जसो तसो बाँचिरहेका छन् र लेखिरहेका पनि छन् । अब यौटा प्रश्न उठ्छ पैसा कमाउनतिर नलागेर किन साहित्यतिर लागेका त यी आदिबासीजनजाति - ठीक यहीँनेर जोडिन्छ राजनैतिक मुद्दा । ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताले सयौंवर्षेखि दबाइरहेको मानवीय चेतनालाई उकास्नका लागि पनि आदिबासीजनजातिहरू भोकै साहित्य लेखिरहेका छन् । तपाइँ हामी विदेशमा बस्ने आदिबासीजनजातिहरूले उनीहरूलाई सहयोग गर्नसक्छौं र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौं । यौटा कोश खडा गरेर प्रतेक महिना सय डलर जम्मा गर्ने हो भने नेपालमा आदिबासीजनजाति साहित्यकारहरूको एकेडेमी बनाउन सक्छौं । हाम्रा प्रतिभाशाली आदिबासीजनजाति स्रष्टाहरूको संरक्षण गर्न सक्छौं । उनीहरूका कृतिहरूको बिक्रीवितरण गर्नसक्छौं र आर्थिक टेवा दिनसक्छौं । आफै लेख्नु मात्रै स्रष्टा होइन, स्रष्टाले आफूजस्तै अन्य स्रष्टालाई बचाउँदै र आफू पनि बाँच्दै जानु पर्छ । हामी विदेशमा बसेर साहित्य लेखिरहेका र पैसा पनि कमाइरहेका साहित्यकारहरूबाट नेपालका हाम्रा आदिबासीजनजाति लेखकस्रष्टाहरूले धेरै आशा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन । भविष्यमा आदिबासी लेखकहरूले रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् । देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध होस् । राज्य संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा गइरहेको अवस्थामा अब हामी पनि लोकसेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा पास हुन्छौं होला । किनभने हिजो लिखितमा फस्ट नम्बर ल्याउने आदिबासी जनजातिहरूलाई अन्तर्वार्तामा अनुहार र नाक हेरेरै फेल गर्नेहरूमा पनि विभेद गर्नु भनेको आफ्नै जाति या वंशका लागि खतरनाक हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान पलाइसकेको छ । यसरी हामीले पनि सरकारी जागिर खाँदै नेपालमै कविता लेख्ने दिन अब चाँडै आउनेछ । अब म केही वर्षछि नै लिम्बुवान फर्कदै छु । म यो तपाइँको ब्लगबाट सबै प्रवासी स्रष्टाहरूलाई आफ्नै थातथलो फर्किनुपर्छ भन्न पनि चाहन्छु ।
Views : 2560 | Date : 2008-08-01
barun limbu from Hong Kong says on 03 December 2008
thanks bagaicha for suchapowerful interview. i really agree with agyat, who is devkota? i'm was confused but never mind, i got an answer. barun limbu,hk